Ahịa gị ọ na-ata ahụhụ site na Fragmentation, ndakpọ olileanya na enweghị nhazi? | Martech Zone
Ikekwe ị zara ee… na nke anyị bụ nsogbu. Enweghị nhazi, nkewa na ndakpọ olileanya bụ isiokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ sitere na nchọpụta nke Cross-Channel Marketing and Technology Survey, nke wepụtara signal (nke bụbu BrightTag). Nsonaazụ ọmụmụ ahụ gosipụtara eziokwu ahụ bụ na ndị na-ere ahịa n'ụzọ ka ukwuu echela na mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyere ha aka inweta ahịa ahịa na-enweghị ntụpọ na ndị ahịa na-atụ anya site na ụdị taa.
signal nyochara iri abụọ na iri abụọ na otu ika na ndị na-ere ahịa ụlọ ọrụ, na-agbasapụ ụlọ ọrụ iri na isii, site na gburugburu ụwa iji chọpụta ihe ịma aka ndị ahịa na-eche ihu iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahia ha.
Ihe Nchoputa nke Ozo Cross-Channel Marketing na Teknụzụ
1 n'ime ndị ahịa 2 na-akọ na teknụzụ kewara ekewa na-egbochi ikike ha iji mepụta ahụmịhe na-agbanwe agbanwe maka ndị ahịa n'ofe weebụ, ekwentị mkpanaaka na ọwa ndị ọzọ
9 n'ime 10 kwenyere na ijikọ ngwaọrụ na teknụzụ dị iche iche ga-akawanye mma ikike ha nwere imepụta ihe ọhụrụ, ịhazi mmekọrịta ndị ahịa, izipu ozi n'oge, ịkwalite iguzosi ike n'ihe, nyochaa mkpọsa, na ịbawanye ROI
51% nke ndị ahịa ahịa kwuru na ha enwebeghị ike ijikọ teknụzụ ahịa gafere ọkwa kachasị mkpa
Ihe na-erughị 1 na ndị na-ere ahịa 20 kwuru na ha nwere nchịkọta teknụzụ zuru ezu
62% kwenyere na ngwaọrụ dị na teknụzụ ha bụ n'okpuru
Naanị 9% nke ndị ahịa kwere na nke ahụ teknụzụ bụ ike ha
Aga m na-ahapụ ihe ọhụrụ Mgbasa ozi vidiyo n'oge na-adịghị anya na ndụmọdụ anyị na-enye ndị ahịa dị iche na ndụmọdụ anyị na-enye ọtụtụ afọ gara aga. Na mgbọrọgwụ ya, ohere iji wuo nke gị ma jikọta na ngwaọrụ na-aghọ nhọrọ dị oke ọnụ maka etiti nnukwu ụlọ ọrụ.
Ọtụtụ mgbe, ngwa ndị a na-edeghị ego anaghị enye afọ ojuju, arụmọrụ, na atụmatụ dị mkpa iji hazie akụrụngwa na usoro gị.
Jide n'aka na ịpị-na-agụ akụkọ zuru ezu - Nyocha Ozo Ntanetị na Teknụzụ!
Tags: gbamgbamahia uzo ahiandakpọ olileanyankewamwekotaJoe Stanhopeafọ ojuju afọnyocha ahịateknụzụ ahịaafọ ojujumgbaàmà